Maitiro ekumisikidza Spatial Audio pane yako Mac | Ndinobva mac
Maitiro ekumisikidza Spatial Audio pane yako Mac
Imwe yesarudzo yatinayo paMacs ndeyekumisikidza spatial odhiyo. Kune avo vese vasingazive chaizvo kuti iyi Spatial Audio chii, tinogona kukuudza muchidimbu izvozvo inosanganisira kuteerera kurira zvine simba rekutevera zvichienderana nenzvimbo yemusoro. Ruzha urwu rwunogoverwa munzvimbo yese ichigadzira inonyudza uye inonyudza chiitiko chekuteerera.
Zvine musoro kune izvi tinoda mudziyo unoenderana nezwi iri uye Mac yedu pamwe neAirPods Pro, AirPods Max kana mahedhifoni anoenderana nerudzi urwu rwekurira ndiyo shoma inodikanwa combo.
Iyo Spatial Audio iwe unowana yakawanda yakanyanyisa chiitiko nekubatanidza kune chishandiso izwi rinosara nemutambi kana chiito chinoonekwa pachiratidziri. Kugonesa nzvimbo yekuteerera muApple Music isu tinofanirwa kutanga tajekesa kuti tinoda iOS 14.6 kana gare gare pane iyo iPhone, iPadOS 14.6 kana gare gare pane iyo iPad uye macOS 11.4 kana kuti gare gare paMac.
Iyi sarudzo yezwi inoenderana ne: AirPods, AirPods Pro kana AirPods Max BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, kana Beats Solo Pro Akavakirwa-mukati masipika paMacBook Pro (2018 modhi kana gare gare), MacBook Air (2018 modhi kana Gare gare) kana iMac (2021 modhi) Mune ino kesi iwe unogara uchifanira kusarudza sarudzo nguva dzese kana tiri kushandisa yechitatu-bato mahedhifoni asingatsigire otomatiki kubatana.
Iye zvino zvatine zvese zvinoratidza rega tione maitiro ekumisikidza ino spatial odhiyo paMac:
Isu tinovhura iyo Apple Music kunyorera uye tinya paZvaunoda
Dzvanya pane iyo Play sarudzo uye sarudza kudonha padhuze neDolby Atmos
Pano tinodzvanya paAutomatic kana Nguva dzose
Muzviitiko zvese izvi isu tichava neiyi Spatial Audio yakavhurwa paMac asi kana tikasarudza otomatiki, iwo matambiro anozotambirwa muDolby Atmos pese pazvinogoneka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekumisikidza Spatial Audio pane yako Mac
Kufungisisa maficha akaburitswa muWatchOS 8 Fitness +
Apple TV + inoramba ichiwana zvibvumirano izvo zvinopa iyo pekutanga sarudzo